Budata Happy Wheels maka Windows
Free Budata maka Windows (4.20 MB)
Budata Happy Wheels,
Obi ụtọ Wheels, nke a makwaara dị ka Wheels Obi intọ na English, bụ nsụgharị kọmputa nke egwuregwu nkà na ụzụ a ma ama nke ukwuu na ngwaọrụ mkpanaka.
Mgbe ibudata Obi ụtọ Obi ụtọ na ibe a, ị nwere ike igwu egwu ozugbo ị wụnyeghị. Anyị na-eme njem nụgbọala nwere wiil na Wheel Obi Happytọ, egwuregwu nkà nwere ike ịbụ ihe nzuzu na ihe ọchị notu oge. Na egwuregwu ahụ, e nyere anyị ohere ịhọrọ otu nime ndị dike dị iche iche. Mgbe ịhọrọ dike anyị, anyị na-egosipụta ike anyị na ngalaba ahaziri iche. Ugbo ala anyi ji egwu egwu bu ugbo ala di nma dika oche ndi oche na ndi mmadu. Ebumnuche anyị mgbe anyị ji ụgbọala ndị a na-akwọ ụgbọala abụghị ka anyị tụgharịa, ghara inwe ihe ọghọm, ka anyị rute na ngwụcha larịị na-enweghị ịrapara nolulu na ọnyà. ihe mberede ọbara na-emekwa.
Negwuregwu egwuregwu nke dabeere na physics nke obi ụtọ, onye dike anyị na-emeghachi omume dịka ragdoll physics si kwuo. Nikwu ya nụzọ ọzọ, aka na ụkwụ ndị dike anyị dịka aka na ụkwụ nwere ike na-agagharị kpamkpam, dike anyị nwekwara ike ime mkpọtụ. Ọ bụ ezie na Wheels Obi hastọ nwere ụdị eserese 2D dị mfe, nzuzu ị ga-eme na egwuregwu ahụ ezuru gị iji nwee ọ .ụ.
Iji gbaa Wheel Obi Happytọ na kọmputa gị, ị ga-agbaso usoro ndị a:
Wepu faịlụ .zip ahụ ị ga-ebudata na ibe a site na iji Winrar ma ọ bụ onye njikwa ihe ndekọ yiri ya.
Dọrọ na dobe faịlụ .swf na faịlụ nchekwa na ihe nchọgharị ịntanetị mepere emepe ma egwuregwu ahụ ga-amalite ibu.
Happy Wheels Ụdịdị
Nha faịlụ: 4.20 MB
Mmepụta: Jim Bonacci
Kacha ọhụrụ na: 02-07-2021